श्रीमानको मृ’त्युको खबरले श्रीमतीले त्या’गिन् प्राण, दुवैको एकै साथ यसरी गरियाे अ’न्त्येष्टि ! – Online Khabar 24
मृ’त्यु यति अनौठो छ की जो मान्छेपिच्छे फरक छ । कसैको दुखद नि’धन हुन्छ भने कसैको महाप्रस्थान हुन्छ ।
धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका वडा नं १० आहालेमा एउटा यस्तै घटना भएको छ ।
खोलाले बगाएर श्रीमानको मृ’त्यु भएको खबर सुनेपछि पी’डा सहन नसकी श्रीमतीको पनि नि’धन भएको छ। सागुरीगढी गाउँपालिका वडा नं १० आहाले नेपाली कांग्रेसका सभापति झगेन्द्र राई कार्तिक २ गते आहालेबाट धरानतर्फ आउँदै गरेको बेला बेपत्ता भएपछि खोजतलास गर्ने क्रममा कार्तिक ३ गते साँझ बैरे खोलाले ब’गाएर मृ’त अवस्थामा फेला परेका थिए।
फेला परेका राईको ला’श धरानस्थित वि पि कोरइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण गरी धरानको हरीयाली जंगलमा नेपाली काङग्रेस धनकुटाका नेताहरुले पार्टीको झण्डा ओ’ढाएर सम्मान गरी अ’न्त्येष्टी गरेका छन्। तर त्यो खबर पाउनासाथ श्रीमतीकोपनि नि’धन भएको छ ।
उनलाई हा’र्ट अ’ट्याक भएको अनुमान गरिएको छ । राई नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशन अन्तर्गत गत महिना वडा अधिवेशनको क्रममा सागुरीगढी वडा नं १० बाट कांग्रेसको वडा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।
श्रीमानको नि’धनको पी’डा स’हन नसकी उनकी धर्मपत्नी अनु राईको समेत ह्र’दयघात भई निधन भएकोले श्रीमान श्रीमतीको एकै साथ अ’न्त्यष्टी गरिएको नेपाती कांग्रेस धनकुटाले जनाएको छ।
बिहीबार दिउँसो धरानको हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा श्रीमान–श्रीमती दुवैको एकैसाथ अ’न्त्येष्टि गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव विजय सन्तोषी राई, कोषाध्यक्ष दिनेश राईलगायत नेताले पार्टीको झन्डा ओ’ढाएर उनीहरूप्रति श्र’द्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
स्व.राई नेपाली कांग्रेसको १४आंै महाधिवेशनअन्तर्गत गत महिना सम्पन्न वडा अधिवेशनबाट साँगुरीगढी–१० को वडा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । स्व.राई द’म्पतीका एक छोरा र एक छोरी छन् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevयि राशीका ब्यक्तीहरू अाजको दिन निकै सतर्क हुनुहोला अन्यथा अाइपर्न सक्छ यस्तो अापत् ! हेर्नुहोस आजको राशिफल
nextगुल्मी जिप दु’र्घ’टना : ‘बाँ”च्नका लागि संगिताले समाएको औंला अझै दु’ख्दै छ’ !